जम्बो मन्त्रिपरिषद्ः मन्त्रीलाई तलब खुवाउनै हम्मे, कति हुन्छ खर्च ? - Deshko News Deshko News जम्बो मन्त्रिपरिषद्ः मन्त्रीलाई तलब खुवाउनै हम्मे, कति हुन्छ खर्च ? - Deshko News
जम्बो मन्त्रिपरिषद्ः मन्त्रीलाई तलब खुवाउनै हम्मे, कति हुन्छ खर्च ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वभाविक रूपमा मन्त्रीको संख्या बढाएर ५४ जना पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमित बजेटबाट तलब खुवाउन हम्मे परेको छ।
बढीमा ४० जना मन्त्रीको अनुमान गरेर वार्षिक बजेट तयार पारेको कार्यालयले थप १४ मन्त्रीलाई तलब खुवाउन करिब १० करोड रुपैयाँ नपुग्ने जनाएको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।
शाखाका एक अधिकृतका अनुसार जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेपछि प्रस्तावित रकममा झन्डै १० करोड अपुग हुने देखिएको छ । “तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग नगरी उपाय छैनु, ती अधिकृतले अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार मन्त्रीको अनुगमन खर्च पनि अब २ करोड बढी लाग्ने देखिएको छ ।”
राज्यमन्त्रीको संख्या बढी भएकाले अनुगमन खर्च मात्रै दोब्बरले बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले मन्त्रीको संख्या बढेपछि तलब(भत्तालगायत खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि बाध्यतावश सरकार विस्तार भएको बताउँदै प्रवक्ता पन्थीले तलब अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए ।